स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने पाँचै नेताले गरे ओलीको आलोचना, काे काे बाेलेका थिए ? – Sudarshan Khabar
स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने पाँचै नेताले गरे ओलीको आलोचना, काे काे बाेलेका थिए ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समितिको पाँचौ दिनको बैठकमा ५ जना स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन् । बैठकमा नेताहरु योगेश भट्टराई, मात्रिका यादव, लीलामणि पोखरेल, पेशल खतिवडा र नन्दकुमार प्रसाईंले आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचन आयोगका दर्ता भएको विषयमा केन्द्रीत भएको छलफलमा बोल्ने पाँचै नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र अभिव्यक्तिको खुलेर आलोचना गरेको बैठकपछि एक नेताले जानकारी दिए ।
बैठकमा पर्यटनमन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई प्रधानमन्त्रीप्रति नरम रुपमा प्रस्तुत भएपनि कार्यशैलीको खुलेर आलोचना गरे । बाँकी ४ सदस्यले भने ओलीको राजीनामाको विकल्प नरहेको धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा भट्टराईले पार्टीमा निषेधको भावना नभइ सहकार्यको भावना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेतृत्व नसच्चिए पार्टी चल्न नसक्ने धारणा राखे ।
‘अहिले देखिएको आन्तरिक समस्या पार्टीभित्र सबैसँग छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्छ । निषेध होइन सहकार्यको भावनाका अघि बढिनुपर्छ’, उनको भनाइ थियो । उनले सचिवालयको विकल्प स्थायी समिति नभएको तर नेतृत्व सच्चिन जरुरी रहेको दोहोर्याए ।
यस्तै लीलामणि पोख्रेल र मात्रिका यादवले ओलीको राजीनामा भन्दा अर्को विकल्प नै भएको धारणा राखे । उनीहरुले पहिलो सर्त नै ओलीको राजीनामा भएकोमा जोड दिएका थिए ।
यसैगरी स्थायी समिति सदस्य पेशव खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत रहेको भन्दै पार्टी विधिमा चल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी अर्का स्थायी समिति सदस्य नन्द कुमार प्रसाईँले अहिलेको समस्याको मुल कारक नै ओली भएको भन्दै उनी कि सच्चिनु पर्ने कि त राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपाको बुधबारको स्थायी कमिटी बैठक झण्डै एक घण्टा चलेको थियो ।
काँग्रेस सांसदको निधनमा संघीय संसदको बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम तय भएको तथा त्यसमा नेताहरु सहभागी हुनुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको हो ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको बुधबार विहान सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।
बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आज ५ जना स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो धारणा राखेको जानकारी दिए । उनले आजपनि हिजोकै एजेण्डा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताका विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल चलेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसअघि मंगलबारको बैठकमा बोल्ने १८ मध्ये अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले ओलीको राजीनामा गरेका थिए । विशेषगरी गत आइतबार ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारत लागिपरेको भन्दै त्यसमा पार्टीकै नेताहरुको भूमिका रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाभित्र विवाद चर्किएको छ ।
यो विषयमा मंगलबारको बैठकमा चर्काचर्की बहस भएको थियो भने ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भनाभन भएको थियो । यस्तै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले समेत ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए ।
एकाएक पार्टीभित्र किचलो सुरु भएपछि ओलीले आज बिहान आफू निकटका मन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्यहरुहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए । स्थायी समितिको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेको लागि तय गरिएको छ ।
प्रकाशित भएको : July 1st, 2020
आमाको सम्पत्ति लिएर आमालाई सडकमा छाड्ने राष्ट्र…
ओलीलाई भिम रावोलको प्रश्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी…
सबै मिलेर आए हुन्छ, एमाले एक्लै चुनाव…
११ गते धरहराको उद्घाटन हुन्छ बम नपड्काउ…
नेपालमा छिट्टै राजा ज्ञानेन्द्र पुन स्थापित भएर…
प्रतिरोधका लागि शक्ति सञ्चय गर्दै छौ: रामकुमारी…